Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Ny fanakanana bilaogy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2018 13:21 GMT 1	 · Mpanoratra Omer Alvie Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fanoherana, Mediam-bahoaka
(Marihina fa tamin'ny volana Martsa 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Azoko antoka fa efa mahafantatra tsara ny hetsika nataon'ny mpanome tolotra aterineto tao Pakistana tamin'ny fanakanana ny tranokalan'ny blogspot.com ireo mpamaky ny Global Voices. Tsy afaka hamarinina raha ny lojikan'ny hevitra ao ambadik'ity fandraràna ity. Nolazaina fa noho ny fanerena avy amin'ny vondrona (politika) ao Pakistana no antony, ary nanery ireo mpanome tolotra aterineto hanakana ireo tranonkala nampiseho ny sariitatry ny Mpaminany Mohammad (PBUH) nampiady hevitra ny governemanta (tamin'ny alalàn'ny Manampahefanan'ny Fifandraisandavitra ao Pakistana). Ny vokatry ny hetsiky ny mpanome tolotra aterineto dia ny fanakanana ny tranonkala blogspot.com rehetra, izay tsy azo jerena ao Pakistana. Ny tsy takatry ny mpanome tolotra aterineto, ny governemanta ary ireo izay nanomboka ny fanoherana ity sariitatra ity tamin'ny fandrarana dia nanakana ireo tranonkalam-bilaogy rehetra tao amin'ny blogspot.com izay nanohitra ihany koa ny famoahana ireny sariitatra nampiady hevitra ireny ry zareo.
Faly aho nitatitra fa ny Global Voices no nitondra ny zava-dehibe ilaina ho an'ny mpamaky marobe talohan'ny nandrenesan'ny fampahalalam-baovao mahazatra momba ny tantara.
Ny tenako manokana dia nanohitra ity fandrarana ny blogspot.com ity izay fomba tokana noheveriko fa lojika, ary izany dia nanombohana ny fanentanana AZA SAKANANA NY BILAOGY  niarahana tamin'ny namana bilaogera tranainy iray, Awab Alvi.
Ho fanavaozam-baovao ny zavatra nosoratana tao amin'ny bilaogy momba ity olana ity, dia araho ny santionan'ny rohy voalaza etsy ambany.
Nanambara ny fanombohana ny fanentanana  i Teeth Maestro; Nanazava tamin'ny antsipiriany ny raharaha blogspot  ihany koa i Procrastination ; Nanolo-kevitra tamin'ny fanoherana ny fandrarana  i Danial; Nanolotra fomba sasantsasany manodidina ny fandraràna  i Ovais Khan; ary farany, Windmills ihany koa dia nanoratra valiny mahery vaika  tamin'ity fandraràna ny blogspot.com ity tao Pakistana.
Nandrisika ny mpamaky rehetra aho mba hanohana ny fanentanana nataonay  na ny fanentanana hafa rehetra momba ny fanehoan-kevitra malalaka an-tserasera. Tena raharaha lehibe izany. Ary misaotra anareo rehetra aho izay nanohana ny fanentanana nataonay sy/na nanao hetsi-panoherana tamin'ity fanakanana ny blogspot.com ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/22/130694/
 fanombohana ny fanentanana: http://www.teeth.com.pk/blog/2006/03/04/dont-block-the-blog/
 raharaha blogspot: http://www.zackvision.com/weblog/2006/03/blogspot-pakistan.html
 fanoherana ny fandrarana: http://danial.pixelsndots.com/archives/380
 fomba sasantsasany manodidina ny fandraràna: http://ovaiskhan.blogspot.com/2006/03/blogspot-blocked-in-pakistan-some.html
 valiny mahery vaika: http://www.kidvai.com/zak/2006/03/wtf.html